January 2, 2022 – Facebook Khabar
नेप्सेमा दुई कम्पनीको ३० लाख ५० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
facebook - January 2, 2022
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा साढे ३० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार दुई कम्पनीको ३० लाख ५० हजार ९१८ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा [ … ]
काठमाडौं : अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारले उत्साह भर्ने काम गरेको छ । आइतबार नेप्से सूचकमा आकर्षक वृद्धि हुँदा खरिदबिक्री रकम समेत विस्तार भएको छ । यस [ … ]
साना किसान विकास लघुवित्तले लाभांशकाे प्रस्ताव पारित हेर्नुहोस कति %पर्सेन्ट दियो ??
facebook - January 2, 2022 January 2, 2022
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको (SKBBL) २० औं वार्षिक साधारण सभाले २६.३१५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेकाे छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुर सभाहलमा सम्पन्न भएकाे [ … ]
जीवन बिकास जस्तै तहल्का मच्चाउने २ लघुवित्तका आईपीओ आउँदै , पर्ने जति मालामाल !
काठमाडौ । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तेस्रो वार्षिक साधारणसभा ३० पुसमा बोलाएको छ । लघुवित्तले आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने मुख्य एजेन्डासहित सिद्धार्थ कटेज धोवीघाट ललितपुरमा बिहान ११ बजे [ … ]
४ बजे बैठक बस्दै | शुल्क बढाएको बिषयमा छलफल गर्न बीमा समितिले बोलायो हाइड्रोपावर प्रबर्द्कलाई, आज ४ बजे बैठक बस्दै
बीमा समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीको बीमा शुल्क बृद्धि गरेको बिषयमा छलफल गर्न हाइड्रोपावर प्रबर्द्कलाई बोलाएको छ । आज ४ बजे बीमा समिति र हाइड्रोपावर प्रबर्द्कलाई छलफल गर्न बोलाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको [ … ]
कहिले दिने आबेदन ? सेयर बजारमा आयो नयाँ कम्पनीको आइपिओ,पर्ने जति मालामाल !
काठमाडौं – नेपालमा प्राथमिक शेयरको निकै चर्चा हुने गरेको छ । यसै बीच आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको सूचीमा एक कम्पनी थपिएको छ । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) [ … ]
तीन दिनपछि खुलेको शेयर बजार आक्रामक बढ्दा नविल बैंकका मालामाल !
काठमाण्डौ । गत बुधबार ५ अंक भन्दा धेरैले बढेर बन्द भएको नेप्से आज आईतबार खुलेसँगै प्रिओपन सेसनमा करिव १४ अंकले बढेर बजार बन्द भएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि [ … ]
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन
पुस १८ गते, आइतबार, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन भएको छ। यस दिन नेप्सेमा सिद्धार्थ बैंक, आरएमडिसी लघुवित्त र सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयरमूल्य समायोजन भएको हो। साधारण [ … ]
पुस १८ गते, आइतबार, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था (AKBSL) को शेयरमूल्य समायोजन भएको छ। साधारण सभा प्रयोजनार्थ लघुवित्तले बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले शेयरमूल्य समायोजन गरी नयाँ [ … ]